Laptop किन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु - Jivan Acharya
Laptop किन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
admin | April 10, 2020 | Tips | No Comments
A central processing unit, also calledacentral processor or main processor, is the electronic circuitry withinacomputer that executes instructions that make upacomputer program. The CPU performs basic arithmetic, logic, controlling, and input/output operations specified by the instructions in the program
ल्यापटप किन्दा प्रोसेसरमा मुख्य ध्यान दिनुहोस् । प्रोसेसर ल्यापटपको मुख्य इन्जिन हो । प्रोसेसरको स्पिड बुझेर मात्रै ल्यापटप रोज्नुहोस् । प्रोसेसर स्पिड फास्ट भएको ल्यापटप आवश्यक पर्छ । लेटेस्ट टेक्नोलोजीअनुसारको प्रोसेसर हुनुपर्छ । प्रोसेसर स्पिड स्लो भयो भने ल्यापटपको फङ्सन नै स्लो हुन्छ । त्यसो त प्रोसेसरको स्पिड मात्रै फास्ट भएर हुँदैन । प्रोसेसरभित्र हुने क्यास मेमोरीबारे पनि ध्यान दिनुपर्छ । क्यास मेमेरो हाई हुनुपर्छ, जसले ल्यापटपलाई चुस्त राख्छ । प्रोसेसर स्पिड कम तथा क्यास मेमोरी लो भएको ल्यापटपको बुटिङदेखि सबै फङ्सनमा समस्या निम्तिन्छ ।
र्‍याम ( Ram)
Random-access memory isaform of computer memory that can be read and changed in any order, typically used to store working data and machine code. A random-access memory device allows data items to be read or written in almost the same amount of time irrespective of the physical location of data inside the memory.
ल्यापटपमा प्रोसेसरको भूमिका जति छ, र्‍यामको पनि उत्तिकै हुन्छ । हाई पावरको र्‍याम हुन जरुरी छ । त्यसो त आफूले कस्तो प्रोग्राम या एप्लिकेसन चलाउने हो, त्यसअनुसार पनि र्‍याम आवश्यक पर्छ । वर्ड, एक्सल मात्रै चलाउनेलाई 2–4 जिबीको र्‍यामले पुग्छ भने भिडियो एडिटिङ, ग्राफिक्सलगायत काम गर्ने हो भने कम्तीमा 8–16 जिबीको मेमोरी भएको ल्यापटप आवश्यक पर्छ । आफ्नो आवश्यकतालाई उपयुक्त हुने ल्यापटप हो-होइन, किन्ने वेलामै ध्यान दिनुपर्छ । त्यसो त र्‍यामको स्टोरेज क्षमता मात्रै होइन, स्पिडबारे पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले बजारमा6सय, 8 सय, 13 सय, 16 सय मेगाहर्ज स्पिडको र्‍याम भएका ल्यापटप उपलब्ध छन् । सकेसम्म 16 सय मेगाहर्ज स्पिडको र्‍याम किन्नु नै उपयुक्त हुन्छ । र्‍यामको जिबीले स्टोरेज क्षमता बताउँछ भने मेगाहर्जले स्पिड फङ्सनलाई जनाउँछ । र्‍याम बढी क्षमताको भएर पनि स्पिड स्लो भयो भने फङ्सनमा समस्या हुन सक्छ ।
In computing, memory refers toadevice that is used to store information for immediate use inacomputer or related computer hardware device. It typically refers to semiconductor memory, specifically metal–oxide–semiconductor memory, where data is stored within MOS memory cells onasilicon integrated circuit chip.
ल्यापटप किन्दा ग्राफिक मेमोरीबारे गम्भीर भएर बुझ्नुहोस् । ल्यापटपमा कस्तो काम गर्ने भन्ने विषयमा निश्चित भएर मात्रै ग्राफिक मेमोरी भएको ल्यापटप किन्नुहोस् । भिडियो एडिटिङ, फोटोसप, डिजाइनिङ, साउन्ड एडिटिङसँग सम्बन्धित काम गर्न ल्यापटप किन्न खोज्नुभएको हो भने ग्राफिक मेमोरीसहितको ल्यापटप चाहिन्छ । यसका लागि डेडिकेडेट ग्राफिक्ससहितको ल्यापटप बजारमा पाइन्छ । यो पनि फरक–फरक जिबी क्षमतामा पाइन्छ । आफ्नो कामको प्रकृति हेरेर किन्नुपर्छ ।
ब्याट्री ( Battery )
पहिलेका ल्यापटपमा ब्याट्री ब्याकअप निकै कम हुन्थ्यो । तर, लेटेस्ट मोडेलका ल्यापटपमा ब्याट्री ब्याकअप राम्रै राखिएको हुन्छ । तर, सबै समान किसिमका भने छैनन् । त्यसैले किन्ने वेला ब्याट्री ब्याकअपबारे ध्यान दिनुपर्छ । अहिले बजारमा4र6सेल ब्याट्री भएका ल्यापटप बढी चलेका छन् । यसमध्ये6सेलको ब्याट्री भएको ल्यापटप किन्नु उत्तम हुन्छ । यसले लामो समयसम्म ब्याकअप दिन्छ । ब्याट्रीमा सेल जति बढी हुन्छ, ब्याकअप उति नै बढी हुन्छ ।
स्क्रिन ( Screen)
स्क्रिनको साइजअनुसार ल्यापटपको साइज तल–माथि हुन्छ । ह्यान्डी साइजको भयो भने बोक्न सजिलो हुन्छ । स्क्रिनको आकार आफूलाई सहज हुने ढंगले रोज्न सकिन्छ । तर, स्क्रिनको पनि रिजोलुसन हुन्छ । यसको ठूलो महत्व हुन्छ । स्क्रिनको रिजोलुसन बुझेर मात्रै ल्यापटप किन्नुहोस् । लो रिजोलुसनको स्क्रिनमा भिडियो, फोटो हेर्दा क्वालिटी राम्रो देखिँदैन । यस्तो स्क्रिनमा कलर डेप्थ आउ“दैन । त्यसैले हाई रिजोलुसन स्क्रिन भएको किन्नुहोस् । 1920³×1080 को एचडी स्क्रिन किन्नु राम्रो हुन्छ । योभन्दा माथिको र तलको पनि पाइन्छ । माथिको किन्दा मूल्य बढी पर्छ भने तलको किन्दा मूल्य र क्लालिटी दुवै कम हुन्छ ।
11 Free Online Courses You Can Take during Quarantine
How to Download YouTube Videos form your pc
How to make Rasbari @ home
How to video call : Step-by-step guide